JINGHPAW KASA: ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၃) မျိုးချစ်ရဲဘော်များ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်
ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၃) မျိုးချစ်ရဲဘော်များ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်
ဇန်န၀ါရီ (၃) ကြာသာပတေး
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) အုပ်ချုပ်နယ်မြေ ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၃) ဒေသဖြစ်သော ဘင်ပူကောင်နှင့် ဒိန်ဂါရွာကြားရှိ ဗမာအစိုးရ တပ်စခန်းတစ်ခုကို ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၃) မှ မျိုးချစ်ရဲဘော်များ ဇန်န၀ါရီ (၂) ရက်နေ့ မနက် (၅း၀၀) နာရီအချိန်ခန့်တွင် သွားရောက်တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ ကေအိုင်အေမျိုးချစ်ရဲဘော်များ ဗမာရှေ့တန်း တပ်စခန်းကို သွားရောက်တိုက်ခိုက်ရာ ဗမာစစ်သားများ သေဆုံး ဒဏ်ရာရမှုရှိပြီး၊ ဗမာစစ်သုံ့ပန်းများကိုလည်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း၊ ဗမာစစ်တပ်မှ လက်နက် (၈) လက်နှင့် ကျည်ဆံအမြောက်အများ သိမ်းဆီးနိုင် ခဲ့ကြောင်း ဆက်လက် သိရှိရပါသည်။
(3rd) KIA Battalion fought Burmese Government army post at between Bin Pu Kawng and Ding Ga village, which is under KIA (5th) Brigade area at 05:00 AM on 2nd January, 2013 according to KIA front-line officer report. In such battle, some Burmese soldiers were arrested, some were wounded and some were died. KIA captured many bullets and 8 weapons.
Good job.., Thank you Jessus Christ..,
La Di said...
karai kasangachye ju hpe shakawn ai law ... myu tsaw share shagan kaji kaba yawng hpe mung ngai ndai shara kaw na kaloi mung kyu hpyi ya ai yaw ...
ပုံ ပြော ကောင်း တဲ့ jinghpaw kasa.
လုပ်သင့်၊ ဖော်ပြသင့်တာကို လုပ်ပါ။ စစ်အာဏာ ရှင် ကျဆုံးပါစေ
nhkum lawtlawt said...
ဆက်ကြိုးစားဆက်တိုက်ပါ ဗမာတပ် ကျရှုံးတော့မယ် နမိတ်တွေပေါ်နေပြီ